စင်ကာပူကျွန်းပေါ်က Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုမှစ၍……မဲပြားပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်လိုက်ပြီ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
April 15, 2008, 1:28 pm
Filed under: Articles, Strongly Suggestion
အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စင်ကာပူသံရုံးမှတဆင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာတွေအတွက် “အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန်ဖိတ်ကြားခြင်း” ဆိုတဲ့ စာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ငါတို့“ဆန္ဒအမှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်ခွင့်ရတော့မယ်ဟေ့” လို့စိတ်ထဲမှာတွေး ရင်းပျော်လိုက်ရတာ……..။
“မြန်မာသံရုံးကနေ စာတစ်တန် …ပေတစ်တန်နဲ့ ခေါ်တယ်ဆိုတာ…..
ဟုတ်…. ဟုတ်…မဟုတ်…ဟုတ် “Vote”… ရမှာပဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ…”
ကဲ….သူငယ်ချင်းတို့ ရေ စင်ကာပူမှာနေထိုင်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသူအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် လူတွေ တစ်သိန်းလောက်ရှိကြသတဲ့….ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ “Vote No” သင်္ကြန်ဆိုတော့လဲ လူငယ်တွေအပြည့်ပဲမဟုတ်လား……မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲ ဆိုတော့လဲ ဒို့လူငယ်တွေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား…။
စင်ကာပူကလူငယ်တွေ “သီးလေးသီးအငြိမ့်ပွဲဟေ့” ဆိုပြန်တော့လဲ ရှေ့ ဆုံးကနေ အားနဲ့ မာန်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြသေးတယ်မဟုတ်လား။
စက်တင်ဘာမှာ ပြည်တွင်းကရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့ အတူ “စင်ကာပူမျိုးချစ်မြန်မာပွဲ” ဆိုရင်လဲ ငါတို့ အားလုံး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြတာ မှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လား……။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ….. “စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်းမှာ ငါတို့ ပြည်သူတွေ စစ်ကျွန်ဘ၀ကလွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့ရရှာတဲ့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအတွက် သွေးကြွေးဆပ်ဖို့ အတွက်…. မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ဖို့ …. စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကိုသွားကြစို့ ..´။
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ….စစ်အစိုးရရဲ့အကျဉ်းချခြင်းကိုခံနေကြရတဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးနဲ့ ၊ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရယ်၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ မမျှအောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ရယ်… ငါတို့ တစ်တွေဟာ ဒီအချိန်မှာ မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ခြင်းဖြင့် ပေးဆပ်သွားသူတွေရဲ့ အသက်သွေး၊ချွေးတွေကို ဂုဏ်ပြုကြရအောင်သူငယ်ချင်း …။
လက်ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အားလုံးဟာ မြန်ပြည်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ အတွက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်….. တာဝန်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အချိန်ကို လေးစားကာ ပြိုင်တူ တက်တက်ကြွကြွ သံရုံးကို သွားရောက်ပြီး “ပြတ်ပြတ်သားသားကန့် ကွက်မဲထည့်ကြပါစို့ ” လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်….။
အဲဒီတော့……သူငယ်ချင်းတို့ရေ ငါတို့ တတွေ …………..အချိန်တူ ……..နေရာတူ …..ပြိုင်တူ …… အသံတူ … ဆန္ဒမဲတွေအတူတူပေးရအောင်…အားလုံးပြိုင်တူ သွားနိုင်မယ့်နေ့ ရက်ကတော့
“ဧပြီလ (၂၇) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်(၉း၀၀ နာရီ မှာ အားလုံးပြိုင်တူ)” သွားရောက်ပြီး ကန့် ကွက်မဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပေးကြပါစို့ လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
” ပြည်သူဟာ အင်အားဆိုတာကို ငါတို့ သက်သေပြနိုင်မယ်” …အရေးအကြီးဆုံးကတော့…. ငါတို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ငါတို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို “စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာတွေကတော့….စောစောစီးစီး… မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်လိုက်ပြီဟေ့” ဆိုတာကိုပြသလိုက်ဖို့ ပါပဲ……
မြန်မာပြည်နေရာအနှံအပြားကနေလာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး တိုင်းရင်းသားအများစု စုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့ စင်ကာပူကျွန်းပေါ်က Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခု မှနေပြီး ကန့် ကွက်မဲပေးတယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံတစ်ကာက သိအောင် ငါတို့ စင်ကာပူမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ညီတူညာတူ ပြကြစို့ သူငယ်ချင်း…… “မဲပြားပေါ်က ကြက်ခြေခတ် ပြည်သူ့ အောင်ပွဲမှတ်” ဆိုတာကို မမေ့နဲ့ သူငယ်ချင်း……“မဲပြားပေါ်က ကြက်ခြေခတ် တွေဟာ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေအတွက်တော့ အောင်ပွဲလက်မှတ်ပဲပေါ့ သူငယ်ချင်း ………… …………………။
မသိသေးတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနိုင်တယ်။ SMS နဲ့သတင်းဖြန့်ဦး။
Comment by လူသစ် April 15, 2008 @ 2:46 pm
ခတ်ပြစ်မယ်.. လုံးဝ ကြက်ခြေခတ်တယ်.. မကြိုက်တဲ့ ဘက်က..
Comment by Min Min April 15, 2008 @ 2:51 pm
စင်္ကာပူက ကြက်ခြေခတ်အောင်ပွဲကို ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေကို အသိပေးနိုင်ဖို့ မျှော်နေမယ်သမီးရေ..
များများ မဲသွားထည့်နိုင်ဖို့ကို သာ ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ…
Comment by ခင်မင်းဇော် April 15, 2008 @ 4:24 pm
နအဖ ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ကတည်းက ဒီမိုတွေဆန့်ကျင်မယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတွက်ထားသလို ဒီမိုတွေဆန့်ကျင်တဲ့အတွက် ဒီမိုများ နအဖ အကွက်ထဲရောက်နေပါပြီ… ပွဲပြီးရင် ဒီမိုတွေ ကွဲပြဲတော့မည်
Comment by Anonymous April 16, 2008 @ 3:02 am